ihichapu | RayHaber | raillynews
Ntughari Corona na Kocaeli ..! A na-emebi ihe mmeri
N'ihi ntiwapụ nke Covid-19, mmetụta nke na-eji nwayọọ nwayọọ na-abawanye ma na-emetụta ahụike mmadụ, Kocaeli Obodo ukwu na-aga n'ihu na-eme mkpochasị ya na oke ọsọ. N'ọnọdụ a, ndị ọha na eze na-eji emebie ihe. [More ...]
Ndi IMM na aga n’ihu mmeghari ihe ndi ocha bidoro n’obodo niile n’ihi coronavirus. Ihicha ngwaahịa eji arụ ọrụ adịghị emerụ ahụike mmadụ na gburugburu ebe obibi. Obodo Obodo Istanbul (IMM) na - ekpochapu Istanbul megide coronavirus [More ...]
Ezie na ıanlıurfa ndị isi obodo na-aga n'ihu na -emecha ihe ọcha n'obodo niile, ndị otu ndị uwe ojii nọ n’etiti ndị isi obodo ukwu; oge a mgbe ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ bakụ bakụ na ebe a na-eme achịcha, obodo dị n'ime na etiti [More ...]
Obodo Ankara na-aga n'ihu na ọgụ ya megide ọrịa coronavirus. Onye isi obodo ukwu Mansur Yavaş kwuru na ya ga-akwado ụmụ amaala iri afọ isii na ise gbagotekwa, ndị ọ kpọrọ “HomeKal” mgbe ọ na-alọta. [More ...]
Ndi Taxi, Minibus na Minibuses ka emere n’obodo Istanbul
İBB mepụtara 100 n'ime ụlọ ọrụ 46 ndị ọhụrụ na-egbochi ọrịa nke Onye isi ala Ekrem İmamoğlu mara ọkwa. Taa, n'ụlọ ọrụ 46 ga-amalite ije n'ehihie; A na-amalite ịrụ ọrụ mgbochi maka obere obere, tagzi na obere obere ụgbọ ala. Ọdụ n'izu a [More ...]
Akpukpo usesgbọala ndị nkịtị na Şanlıurfa
Obodo ukwu nke obodo mepere bọs ndị mmadụ mgberechara ndị njem njem ọha na eze na BELSAN A.Ş. Ọ bụ ezie na ọrụ na-ebido n’abalị na-aga n’ihu ruo ụtụtụ, ngwa ahụ ga-aga n’ihu n’oge. Şanlıurfa [More ...]
Oke nke Nsacha na-abawanye na Transportgbọ njem Ọha na Gaziantep
Obodo Gaziantep na-agbasawanye mkpocha nhicha na njem ọha maka ahụike ọha. Esgbọ ala ọha na-acha anụnụ anụnụ na nke na-acha odo odo, tagzi, tagzi na obodo maka ọrụ ya na-arụ ọrụ na trams na bọs nke Metropolitan [More ...]
Mgbe nje corona nke malitere na China ma kpatara oke ụjọ n'ụwa niile, nhicha nke ụgbọ njem na-apụtawanye elu. Okpokoro traktị Akçaray nke cagbọ njem na Kocaeli Obodo ukwu [More ...]
Disgbọ njem ọha, Onyunye na Bazaars na-apụ na Bursa
The mbụ corona virus mgbe a mara ọkwa nke omume ikpeazụ Bursa Metropolitan ngagharị Municipality na Turkey, BursaRay ụgbọala, ọha iga, ụlọ alakụba mgbe T1 na T2 tram akara, ihu arụsị, ngosi ihe mgbe ochie, na-eji ndị mmadụ dị ka ọrụ n'aka [More ...]
Gbọ njem dị ọcha na Ọha Ọha maka Ahụike Ọhaneze
Obodo Gaziantep na-aga n’ihu imewe ihe ọcha ọ na-eme iji hụ na ụmụ amaala na-eji ụgbọ njem ọha na-arụ n’obodo na-eme ka ebe obibi dị ọcha karị. Ationgbọ njem Obodo Gaziantep [More ...]
Turkey nwere otu nke kasị ogologo ụzọ netwọk na Şanlıurfa Municipality, nakwa dị ka ofu-obodo ọnụ chọrọ na ọha iga ugbo ala dị ka nke ọma dị ka collection ebe a na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ọcha na ịdị ọcha na uloanumaanu. 180 kwa ụbọchị [More ...]
Ankara Obodo Ankara, nsogbu ahụike ọha na ndị nwere njikọ chiri anya n'okwu ọmụmụ a bụ banyere. N'iburu n'uche oge ọrịa na ọrịa na-efe efe, EGO General Directorate emeela nhicha ọfụma karịsịa na bọs ndị ụmụ amaala na-ejikarị. [More ...]
Disinfection nke ụgbọ njem ụgbọ ala na Balıkesir
Bal Planningkesir Metropolitan Municipality Transportation Plan na Rail Systems Ngalaba ,gbọ njem, ọha iji chebe ụmụ amaala na-eme njem site na ọrịa na-efe efe iji merụọ ụgbọ ala niile dị na ahụ. Karịsịa na ọrụ nhicha [More ...]
Enweghị ọnụ ụzọ ámá nke nje na ụgbọ ala ọha na eze
Enweghị ọnụ ụzọ nje virus na ụgbọala njem ọha na eze nke obodo: Ọ nwere ike ibute nje na nje na-abawanye n'ebe ndị mmadụ na-ezukọ. Enwere ihe ize ndụ nke ibute ọrịa n'ụgbọ njem ọha na eze ebe mgbasa mmadụ na-elu. ọhụrụ [More ...]
Ụlọ Ọchịchị Obodo na Kayseri Ọrịa
A na-ahụzị ụgbọ ala ndị dị na Kayseri: Ngalaba Mkpokọta Mkpo Kpọeri, Mmezi na Mmezi na-emebi ụgbọ njem ọha na eze maka ịdị ọcha kwa ụbọchị. Ọgba aghara nke ndị na-efe efe [More ...]
A na-ekpochapụ ụgbọ ala IETT kwa ụbọchị
A na-agbanye ụgbọ ala IETT kwa ụbọchị: ụgbọ ala IETT na obodo ukwu, bụ ndị na-efe ọtụtụ puku ndị njem kwa ụbọchị, na-edo onwe ha ọcha na n'ime mpụga na-adọba ụgbọala ma laghachi ọrụ ụtụtụ. Ndị bi na Istanbul n’ebe a na-eme ka ahụ́ sie ha ike [More ...]